Iindaba-zelaphu lePique Mesh
Inkcazo kunye nokuhlelwa kwegama lepeyinti:
I-pique mesh: ngengqondo ebanzi, lixesha eliqhelekileyo lendlela yesitayile se-concave-convex yeluphu ezinithiweyo. Ngenxa yokuba ilaphu linempembelelo efanayo engalinganiyo, umphezulu odibene nolusu ungcono kunejezi enye eqhelekileyo ngokwempepho nangokusasaza kobushushu, kunye nentuthuzelo yokubila. Ngengqondo emxinwa, kuthetha indlela-4, umjikelo omnye, ikhonkrithi-convex yelaphu ebotshwe ngumatshini wejezi omnye. Ngenxa yokuba umva welaphu ubonakalisa imilo engunxantathu, ihlala ibizwa ngokuba yiminatha enamacala amane kwimizi-mveliso.
Kukho umnxeba oqhelekileyo ophindwe kabini. Kuba umva welaphu ubume obunamacala, uhlala ubizwa ngokuba yi-hexagonal mesh kwishishini. Kuba ulwakhiwo olungalinganiyo ngasemva luyafana nebhola ekhatywayo, ikwabizwa ngokuba yimethi yebhola ekhatywayo. Eli laphu lisetyenziswa njengecala elingaphambili lengubo kwisitayile esinamacala amabini kwicala elingasemva.
Ayilunganga ukusebenzisa umnatha ukubiza ipeyinti enemingxunya, kuba ilaphu alinawo umnatha ocacileyo. Kwaye ezinye iinguqulelo zokoqobo ezibonakala ngathi zineekona ezinee-meshes kunye ne-hexagonal meshes zifuna ukuqinisekiswa okungaphezulu kokulungiswa kwamalaphu kunye nesitayile. Ngaba yimpazamo yokuguqulela phakathi kwe-warp knitting mes-comb mesh kunye ne-six-comb mesh?
Ikhutshwe kutshintsho lwe-mesh yomhlaba ene-peced okanye i-mesh yomhlaba ene-double-peced, iintlobo ezahlukeneyo zezitayile zesakhiwo se-pique esinamacala amabini sinokuphuhliswa. Ukubandakanya amanye amalaphu anokuphothwa ngokwahlukeneyo ngeepayi kunye neejezi, kukho imigca ethe nkqo, imigca ethe tyaba, izikwere, njl. Kwakhona kunokwenzeka ukudibanisa iintlobo ezahlukeneyo zamalaphu ngejacquard.
Oomatshini bokuluka-macala amabini banazo ezinye iimpahla, ezinesakhiwo se-concave-convex, esibizwa ngokuba yimicu enamacala amabini kwiindawo ezithile. Qaphela ukuba kufuneka yahlulwe kumbethe ophindwe kabini kumatshini wokunitha wejezi. Ukucula kabini kunye namalaphu okubonisa imfesane, imisonto enemibala emikhulu yemibala, ikhompiyutha yejacquard, ikhowudi yokulenga ikhompyutha, imodal / bamboo fiber / tencel / ukufunxa amanzi kunye nokubila ifayibha / ifayibha yokubulala iintsholongwane / umqhaphu we-organic kunye neminye imicu. Luhlobo oluphezulu lokuphela kweempahla zamalaphu e-pique.
2.Iindidi zemingxunya ye pique:
Uboya-obudaywe ngombala onemigca ipeyinti eyodwa ipeyinti ngelaphu
Yolula i-pique single mesh nge spandex
Ishicilelwe ipeyinti kabini pique
Plain kabini pique enemingxuma
3.Isicelo seZambatho zePique Mesh
I-T-shirts ezinemibala enemibala zenziwe zathandwa kangangeminyaka emininzi, ilaphu leT-shirt elilungele amadoda nabafazi. Ngokudityaniswa kwelaphu, ubume bokubumba (ubukhulu obahlukeneyo nokungalingani), ukonakala kombala, utshintsho kububanzi bemivumbo, uyilo kunye nokulungiswa kwendlela ethile yokunxiba, zinokutshintshwa iiT-shirts ezityebileyo. .
Ihempe yengwenya enemivalo yombala weklasikhi. Nditsho nelaphu eliphindwe kabini elibizwa ngegama lika "Lacoste".